Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Fitaterana an-dalambe ao Pakistan
Entin'ny sohologiste ny entanao manerana an'i Shina avy eo dia hitaterana mankany amin'ny seranan-tsambo kashgar ao Xinjiang mankany amin'ny haavo fifankahalalana any Shina-Pakistan (KKH) (làlana Karakoram, antsoina hoe KKH na Pamir Highway), amin'ny alàlan'ny khunjerab amin'ny sisin-tanin'i China-Pakistan any atsimo. ary tonga tany Islamabad, renivohitr'i Pakistan hozaraina manerana an'i Pakistan taorian'ny nahavitany ny fomban'ny fanao amin'ny Sost port any Pakistan.
Inona avy ireo karazan'entana mifanentana amin'ny zotra iraisam-pirenena mankany Pakistan?
Ho an'ny entana ao anatin'ny 2.5 metatra ny sakany ary 13 metatra ny halavany. Ankoatr'izay, noho ny fitarihan'ny toetrandro sy ny jeografia, ny fotoana misokatra amin'ny fitaterana làlana iraisam-pirenena any China-Pakistan dia manomboka amin'ny volana Aprily ka hatramin'ny Novambra isan-taona.
Ahoana ny fomba hanatanterahana ny fanambarana momba ny fadin-tseranana, ny famindrana ny fomba amam-panao ary ny fahazoan-dàlana ho an'ny zotra iraisam-pirenena mankany Pakistan?
A. Fitaterana an-dalambe mankany Pakistanis manatanteraka ny fanambarana fanondranana araka ny fampahalalana mifandraika amin'ny fiara fitaterana vahiny sy ny fadin-tseranana any an-toerana taorian'ny fitaterana fiara vahiny any amin'ny trano fitehirizam-bokatra.
Ny fitaterana làlana ara-làlana mankany Pakistan dia azo ambara ao amin'ny seranan-tsoratry ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana na amin'ny toerana misy ny tetikasa.
Iza no mampiasa ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Pakistan?
Ahoana ny momba ny volavolan-dalàna famoahana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena mankany Pakistan?
Fitaovana CMR navoakan'ny sendika iraisampirenena iraisam-pirenena, izay eken'ny firenena ASEAN any Azia afovoany sy ireo firenena CIS hafa. Ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny cargos, ny shipper, consignee, carrier izay mitovy amin'ny volavolan-dalàna fakana entana